တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းလာ - Xinhua News Agency
ပေကျင်း ၊ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းနိုင်ငံရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဝမ်းယန်(Wang Yang) သည် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဆီးနိတ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ Samdech Say Chhum နှင့် အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်တွင် ရုပ်သံလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတို့အကြား အစဉ်အလာချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို ချီးကျူးခဲ့ပြီး တရုတ်ပြည်သူ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုညီလာခံ(CPPCC) အမျိုးသားကော်မတီဥက္ကဌ ဖြစ်သူ ဝမ်းယန်က နှစ်ဘက်လုံးအနေဖြင့် အဆင့်မြင့်ဖလှယ်မှုများသည် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတွင် နိုင်ငံရေးအရ ဦးဆောင်အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်သည်ကို သေချာစေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဝမ်းယန်က တရုတ်-ကမ္ဘောဒီးယား နှစ်နိုင်ငံက သက်ဆိုင်ရာအဓိကအကျိုးစီးပွားများနှင့် ပတ်သက်သည့်ကိစ္စရပ်များအပေါ်တွင် ခိုင်မာသည့် အပြန်အလှန်ပံ့ပိုးမှု ထောက်ပံ့ပေးရန် ၊ ကဏ္ဍအားလုံးတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုနက်ရှိုင်းစေရန် ၊ ရပ်ဝန်း နှင့် ပိုးလမ်းမအား အတူတကွ တည်ဆောက်ရန် နှင့် ဘုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ရှာဖွေရန် တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။
တရုတ်ပြည်သူ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုညီလာခံ(CPPCC)သည် ကံကြမ္မာအကျိုးတူအသိုက်အဝန်းနှင့်အတူ တရုတ်-ကမ္ဘောဒီးယား အသိုက်အဝိုင်းအား ထောက်ပံ့ပေးရန် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ ဆီးနိတ်လွှတ်တော်နှင့်အတူ အဆင့်အားလုံးတွင် ဖလှယ်မှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဆီးနိတ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ Samdech Say Chhum က COVID-19 ရောဂါတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ ဆီးနိတ်လွှတ်တော်သည် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးအတွက် CPPCC နှင့်အတူ ဆယ်ဆံရေး နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတို့ကို မြှင့်တင်ရန် အဆင်သင့်ရှိကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
BEIJING, Oct. 12 (Xinhua) — China’s top political advisor Wang Yang on Tuesday met with Cambodia’s Senate President Samdech Say Chhum via video link.
Hailing the traditional friendship between China and Cambodia, Wang, chairman of the Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC) National Committee, said the two sides should ensure that high-level exchanges playapolitically leading role in bilateral ties.
The CPPCC is willing to continue exchanges at all levels with Cambodia’s Senate to contribute to the China-Cambodia community withashared future, he added.
For his part, Say Chhum expressedawillingness to enhance cooperation on COVID-19 response, adding that Cambodia’s Senate is ready to step up communications and cooperation with the CPPCC to promote bilateral ties. Enditem
Photo – Wang Yang, chairman of the Chinese People’s Political Consultative Conference National Committee, meets with Cambodia’s Senate President Samdech Say Chhum via video link in Beijing, capital of China, Oct. 12, 2021. [Photo/Xinhua]